QALABKA: QALABKA SHAQADA, QAABEYNTA, TALOOYINKA ISTICMAALKA - MISHIINADA GAARKA AH
Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro xaalado wanaagsan oo dhirta iyo ciidda. Dhulku waa inuu ku jiraa nafaqooyinka iyo oksijiinka. Si arrintan loo sameeyo, samee beerta adoo adeegsanaya xaansho. Maqaalka waxaan ku sheegi doonaa xajmiga iyo noocyada kala duwan ee loo isticmaalo inta badan.
Qaadirku waa mashiinka beeraha oo loo isticmaalo in lagu rido dhulka. Mabda'a hawlgalka qalabku wuxuu ka kooban yahay jajabinta cidhibta ciidda waxayna sii wadi doontaa hoosta diiqadda la sameeyay ee dhulka.
Waa muhiim! Wixii carrada dhoobo dhagaxa ah waa in la doorto cutubka leh qalab kabaal. Haddii ay dhacdo maqnaanshaheeda, qaab-dhismeedku wuxuu ku shaqeyn doonaa shaqo la'aan.
Inta lagu jiro beerashada, cagaarka iyo haraaga dalagga beeraha ah ayaa hoos u dhacaya dhulka. Ka hor inta aan la qodin waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso qoto dheer oo ah 18 illaa 35 cm Tilmaamahan wuxuu kuxiranyahay ereyada qallafsan.
Qeybaha ugu waaweyn ee cutubka waxaa ka mid ah:
hay'adaha shaqada iyo hababka;
Warqaddan, saameynta ugu weyn waxay kudhacdaa qaabka, curiyaha iyo saxan mindi.
Iyada oo ku xiran ujeedada cutubka, noocyada kala duwan ee dhoobada loogu talagalay tractors ayaa kala duwan. Waa mid aad u muhiim ah in la doorto habka saxda ah ee beerista - marka la isticmaalayo qalab aan fiicnayn, tiknoolajiyada beeritaanka iyo dhirta sii kordhaya waa la gooyaa.
Qaadku waa la doortaa iyada oo ku xiran cirbadeynta. Noocyada ugu caansan beeraha waa: T-25, T-150, MTZ-80, MTZ-82, Kirovets K-700, Kirovets K-9000.
Ka hor inta aanad dooran qalabka lagu shaqeynayo waa muhiim inaad go'aamiso waxa lagama maarmaanka u ah. Iyadoo lagu saleynayo ujeedooyinka la dabagalay, kuwan soo socda Noocyada qaababka:
qalab guud oo guud. Sida caadiga ah, qalabka noocan oo kale ah wuxuu leeyahay shaqooyin shaqaynaya oo leh qiyaasta cabbirka caadiga ah, cabbirka kaas oo ah 35 cm. Iyadoo leh, carrada cawska leh ee la beeray waa la beeray, taas oo markaa lagu beeray farsamo, qudaar iyo dalag.
qalab gaar ah. Qaybtani waxaa ku jira unugyada beerta iyo beeraha, qaababka ay dhagaxyada, xayawaanka-bogga ee beeraha loo beeray, iyo beeritaanka beeraha canabka ah. Qodobada qashinka ah ee noocyada dheeriga ah ee loo yaqaan "chestnut" iyo "caraf".
Noocyada kala duwan ee qaababka waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah oo maareynta iyo isticmaalka, sidaa daraadeed waa muhiim in la ogaado nooca cutubka loo baahan yahay kiis gaar ah.
Iyada oo dabiiciga ah ee riixitaanka codsiga
Iyadoo ku xiran nooca daloolka codsiyada qalabka soo socda:
faras farabadan. Farsamooyinka noocan oo kale ah ayaa inta badan lagu isticmaalaa meelaha yaryar iyadoo ay ugu wacan tahay awood la'aanta gaadiidka unugga taribuunka;
duufaan. Isticmaal kiisaska intooda badan ee falcelinta, waa qalab casri ah oo la beerto;
tuugada. Cutubyada noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa daaweynta qoyaanka dhulalka buuraha sababtoo ah la'aanta awoodda farsamada ee qalabka cagaf-qabsiga si looga shaqeeyo xaaladaha noocaas ah.
Goobaha yaryar waxaa aad u sahlan in la isticmaalo gawaarida yaryar, taas oo gacanta lagu samayn karo.
Isticmaalka aan habboonayn ee farsamadu waxay keenaysaa burburintiisa, sidaas awgeed waa muhiim in la doorto qalabka saxda ah ee aag gaar ah.
Iyadoo la raacayo mabda '
Iyadoo ku xiran laga soo bilaabo nooca xidhiidhka udub dhexaad u ah Qalabka noocyada soo socda:
xayawaanka la riixay. Qulqulayaasha qaab dhismeed fudud iyo miisaan yar yar. Sida caadiga ah ee farsameynta, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo madaxa oo leh ballac yar. In aad ku jirto booska gaadiidka, qalabka noocan ahi wuxuu u gudbiyaa masaafo yar oo gaaban;
Waa muhiim! Si aad boodhka ugu gashato dharka xarkaha sida ugu macquulsan, waxaa lagama maarmaan ah in la cadaadiyo sanduuqda walxaha leh ee laga sameeyay dareeraha iyo xargaha caagga ah ee kabaha.
xayawaan lagu rido. Waxay leedahay iska-caabin yar iyo raadiye weyn. In aad ku jirto booska gaadiidka, qaar ka mid ah qaybaha cutubku waxay ku dhacaan muraayad gadaal;
xayawaan la riixay. Waxaa ka mid ah 3 taayirada iyo rikoodhka, taas oo lagama maarmaan u ah xaqiijinta degganaanshaha dhaqdhaqaaqa iyo tayada sare leh. Sida caadiga ah, cutubyada la jajabiyey waxaa ka mid ah beerta, unugyada dheeraadka ah, iyo sidoo kale aaladaha loogu talagalay in lagu xakameeyo carrada xaydaanka.
Had iyo jeer inta badan hababka beeraha ayaa lagu isticmaalaa.
Qaado qaabka jirka
Qoondaynta aragga iyadoo ku xiran jirka waxaa ku jira qaababka noocyada noocaan ah:
rookey. Nooca ugu caansan ee cutubka, kaas oo loo adeegsaday tan iyo wakhtiyadii hore;
disk. Iyada oo gacan ka heleysa qalab noocan oo kale ah ayaa caleemo culus, oo la qalajiyey iyo carrada qallafsan ee meelaha la waraabiyey;
isku dhafan iyo wareegyo. Cutubyo khaas ah oo loo isticmaalo kiisaska dhifka ah ee lagu sameeyo noocyada kala duwan ee carrada. Ka hor inta aan la isticmaalin, hubinta wax-soo-saarka ee qalabkan waa in la fuliyaa.
Ma taqaanaa? Guntii ugu horeysay ee lagu iibiyo iibinta waxaa lagu sameeyey 1730 England.
Qalabaynta. Waxaa loo isticmaalaa si aad u yar sababtoo ah maqnaanshaha qaabka ugu muhiimsan ee qulqulka - wareegga kaydka.
Nooca ugu badan ee la isticmaalo waa xoqan. Waxaa loo isticmaalaa dhammaan noocyada carrada loogu talagalay beerista dalagyada beeraha.
Qalabka: Talooyin iyo tabaha loo isticmaalo isticmaalka qalabka
Iyadoo aan loo eegin nooca xayiraadda waxaad isticmaali doontaa ka hor intaanad bilaabin shaqada waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo iyo habka hagaajinta. Waxay ka kooban tahay qodobbada soo socda:
Waa muhiim in la hubiyo sharafta qaabdhismeedka, haddii qaybo ka mid ah ay dabacsan yihiin, waa lagama maarmaan in la adkeeyo. U hubso inaad saliideyso dhammaan qaybaha wax wada qabashada iyo kuwa la soo gelayo.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, xayawaanku wuxuu ahaa xushmad. Xatooyadiisa ayaa loo arkaa inuu yahay dambi culus isla markaana tuugo culus oo culus qaaday.
Isbedelka qoto dheer ee dhulka. Nidaamka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo qalabka wax lagu toosiyo. Haddii ay jirto xaalad aan fiicneyn, xayawaanku wuxuu aadi doonaa meel aad u qoto dheer.
Heerka mareegaha masaafada ah ayaa la hubiyaa. Meelaha ulaha ee isla hal diyaarad ayaa loo tixgeliyaa khasab.
Marxaladda kama dambaysta ah waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo ballaarinta cirifka. Si arrintan loo sameeyo, bedel dhererka xakamaynta. Inta badan dhererka, waa weyn yahay ballaaran ee qalabka.
Marka aad dooranayso farsameynta beerta, waxaa ugu wanaagsan in lala xiriiro saaxiib ama khibrad khaas ah. Waxay kaa caawin doonaan inaad sameysid doorasho iyo inaad bixiso talo ku saabsan isticmaalka dharka.